အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: Feb 6, 2010
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Saturday, February 06, 2010 Saturday, February 06, 2010 Labels: ၀တ္ထုတိုများ
နီလာဆိုတဲ့ကောင်မလေးအကြောင်း မခင်မွန် စပြီး ကြားသိခဲ့ရတာက မိတ်ဆွေတစ်ယောက် ဖုန်းပြောနေချိန် အမှတ်မထင် ဘေးနားရောက်နေရာကနေ သူ့ရဲ့ အကြောင်းလေးကို သိခွင့်ရလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်.. နီလာ လေးဟာ အသက် ၁၈နှစ်အရွယ် မိန်မငယ်လေး တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မှာ နေထိုင်သူဖြစ်ကာ ၁၀တန်း စားမေးပွဲကိုလည်း မအောင်မြင်၊ အိမ်နဲ့ အဆင်မပြေ၊ မိခင်ဖြစ်သူနဲ့လည်း စကားမပြော ဖြစ်ကာ အိမ်မှာ မနေချင်တဲ့စိတ်၊ အဝေးကို ထွက်ခွာချင်စိတ်တို့ကြောင့် အသက် ၃၀ကျော်အရွယ် အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ရဲ့ တရုတ်ပြည်မှာ အလုပ်ကောင်းကောင်းရမယ်.. လစာကောင်းမယ် ဆိုတဲ့ စကားကို ယုံစားပြီး လိုက်သွားခဲ့သူပါ. နီလာနဲ့အတူတူ မိန်းခလေး အရွယ်ကောင်း အယောက် ၂၀နီးပါး ပါဝင်ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်… သူမတို့ကို တရုတ်ပြည် အတွင်းထဲသို့ တရားမ၀င် လမ်းကြောင်းမှ မ၀င် ရောက်ခင် မူဆယ်မြို့မှာ ရှိတဲ့ မခင်မွန်ရဲ့ မိတ်ဆွေဆိုင်ကို အမှတ်မထင် ရောက်ရာက မိတ်ဆွေရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို နီလာက ရရှိသွားပြီး မှတ်သား သွားခဲ့ပါတယ်..
တရုတ်ပြည်ထဲသို့ ဖြတ်လမ်းများ၊ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသော လမ်းသွယ်များမှ ပွဲစားဖြစ်သူ မိန်းမလည် အမျိုးသမီးက ခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက် ဟောနန့်ပြည်နယ်မှ တရုတ်အမျိုးသားများထံ သူမတို့ ကွယ်ရာတွင် ငွေကြေးဖြင့် လက်လွှဲ ရောင်းချလိုက်ခြင်းကို ခံလိုက်ရပါတယ်… ဒီတော့မှ အလုပ်လဲ မရဘဲ တစ်ခြားနိုင်ငံမှာ တိုင်းတစ်ပါးသားရဲ့ မယားပြုလုပ်ဖို့ ရောင်းစားခြင်းခံရတယ် ဆိုတာကို သူမတို့ သဘော ပေါက်ကြ ပါတော့ တယ်… သို့သော် အချိန်နှောင်းခဲ့ပါပြီ.. နီလာနဲ့ အတူ ခေါ်ဆောင် သွားခြင်းခံရသော မိန်ခလေးအားလုံး အယောက် ၂၀ နီးပါးလုံးဟာ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနဲ့ နယ်ဒေသမျိုးစုံမှ မိန်းမငယ်လေးများ ပါဝင်ပြီး တရုတ်စကား သိသူ တတ်သူ တစ်ယောက်မှ မပါဝင်ကြပါ။ တရုတ်စကားလဲ မပြောတတ်မှတော့ ဝေးကွာလှသော အပြန်လမ်းကို မည်သည့်နည်းနဲ့ ပြန်ဖို့ဆိုတာ စဉ်းစားလို့ မရေရာ နိုင်တော့တဲ့ အဖြစ်ပါ.. ရောင်းစားပြီး ပိုက်ဆံ ရသော အမျိုးသမီးမှာ ၀ယ်ယူထားသော တရုတ်အမျိုးသား အသီးသီးတို့ထံ သူမတို့အား ထားရစ်ကာ မြန်မာပြည်သို့ ပြန်သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်… ထိုအမျိုးသမီးဟာ ဒီလိုနည်းနဲ့ မြန်မာပြည်တွင်းမှ မိန်းခလေးများကို ခေါ်ဆောင်လာပြီး တရုတ်ပြည်တွင် ရောင်းစားနေခဲ့တာ အကြိမ်ပေါင်း မြောက်မြားစွာ ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း မခင်မွန် သိလိုက်ရပါတယ်..
လအနည်းငယ်ကြာတော့ နီလာကို ၀ယ်ယူပြီး ပေါင်းသင်းနေတဲ့ အသက် ၄၀အရွယ် တရုတ်အမျိုးသားကြီးမှာ နီလာကိုင်ဖို့ ဖုန်းတစ်လုံး ၀ယ်ပေးရာမှ မူဆယ်မြို့ရှိ သူမမှတ်သားသွားသော မိတ်ဆွေတစ်ဦးရဲ့ ဖုန်းကို ဆက်ဖို့ အခွင့်အရေး ရလာပါတယ်.. သူမ လက်ရှိရောက်နေသော တရုတ်နိုင်ငံ ဟောနန့်ပြည်နယ်မှ မြန်မာပြည်သို့ ပြန်လာချင်ကြောင်း တရုတ်စကားလဲ မတတ်တဲ့ အတွက် ဘယ်လိုပြန်ရမည် မသိကြောင်း၊ ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံ ကြုံတွေ့နေရကြောင်း စသည်တို့ကို ပြောပြလာပါတယ်.. ဒါကို ကြားသိရပြီး မနေသာတဲ့ မခင်မွန်၊ ကိုယ့်မြန်မာ မိန်းခလေး ငယ်တွေ ဒုက္ခ ရောက်နေတာကို မကြည့်ရက်တဲ့ စိတ်နဲ့ နီလာရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို မိတ်ဆွေထံမှ တောင်းပြီး အဆက်အသွယ် လုပ်ရပါတော့တယ်…
မခင်မွန် သူ့ကို သေချာမေးပါတယ်.. တကယ်ပြန်ချင်စိတ်ရှိရဲ့လား၊ ရှိရင် ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် သူ ကူညီမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ကို နီလာ နားလည်အောင် ရှင်းပြပါတယ်… နီလာကလဲ သူမ နေရတာ အဆင်မပြေကြောင်း၊ အိမ်ကိုသာ ပြန်ချင်ကြောင်း ပြောပါတယ်.. ဒီတော့ မခင်မွန်က နီလာကို သူရောက်နေတဲ့ နေရာနဲ့ အနီးဆုံးရဲစခန်း တစ်ခုခုကို သွားပြီး အကူအညီတောင်းဖို့ ရဲစခန်းရောက်တာနဲ့ မခင်မွန်ဆီ ဖုန်းခေါ်ပြီး ရဲတွေကို ဖုန်းထိုးပေးလိုက်ဖို့ ပြီးတော့ မခင်မွန်ရဲ့ တရုတ်စကားတတ်တဲ့ လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက် ညီမလေးက ရဲတွေကို တရုတ်လိုရှင်းပြ အကူအညီတောင်းဖို့ အကြံ ပေးပါတယ်.. ဒါကို နီလာလေးက လက်ခံသဘောတူပြီး သူ့ကို ၀ယ်ယူထားသူ တရုတ် အမျိုးသားကြီး အလစ်မှာ အိမ်ကနေထွက်ပြေးဖို့ သူကြိုးစားမယ်၊ သူမနဲ့အတူ ဖုန်းအဆက်အသွယ်ရှိသော သူငယ်ချင်းတစ်ချို့လဲ အတူတူ ထွက်ပြေးကြဖို့ တိုင်ပင်ထားကြောင်း ပြောပါတယ်.. မူဆယ်က မခင်မွန် မိတ်ဆွေက နီလာတို့ မိဘတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်လုပ်ပါတယ်.. တစ်ရက် နှစ်ရက်မှာ နီလာ့မေမေက မူဆယ်ကို လိုက်လာပြီး သူ့သမီးကို လာကြိုမယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြန်ကြားချက်ကို ရပါတယ်…
ဒီလိုနဲ့ မိုးရာသီရဲ့ တစ်ခုသော နေ့တစ်နေ့မှာ နီလာဟာ သူမရောက်နေတဲ့ ရွာငယ် ကလေးကနေ အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ တရုတ် ရဲစခန်းတစ်ခုကို ရောက်အောင် သွားပါတယ်.. သူမရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ အခြေအနေ မပေးတာကြောင့် ထွက်ပြေးဖို့ အခွင့်မသာခဲ့ပါဘူး… ရဲစခန်း ရောက်တာနဲ့ မခင်မွန်ဆီ နီလာက ဖုန်းခေါ်ပါတယ် တရုတ်စကား ကျွမ်းကျင်တဲ့ မခင်မွန်ရဲ့ ညီမလေးက တရုတ်ရဲတွေကို သေသေချာချာ ရှင်းပြပြီး အကူအညီ တောင်းတော့ တစ်ယောက်ယောက်က အာမခံပြီး လာခေါ်မှ ဖြစ်မယ်လို့ရဲတွေက ပြန်ပြောပါတယ်.. ဒီကနေ တစ်ယောက်ယောက်က တာဝန်ခံပြီးသွားခေါ်ဖို့ဆိုတာလဲ မဖြစ်နိုင်တော့ ခေါင်းပူအောင် စဉ်းစားရင်း နောက်ဆုံးသတိရလိုက်တာက ဟောနန့်ပြည်နယ်မှာ မခင်မွန်တို့ ကုန်ပစ္စည်း ၀ယ်နေကျ ကုန်သည် တစ်ယောက်ဆီကို ဖုန်းဆက်ပြီး အကူအညီ လှမ်းတောင်းရပါတယ်.. အဲဒီကုန်သည်ကလည်း သဘော ကောင်းစွာနဲ့ နီလာရှိတဲ့ ရဲ့စခန်းကို ခရီးမိုင်များစွာ ကားမောင်းသွားပြီး ရဲစခန်းမှာ အာမခံကာ ခေါ်ထုတ် လာပေးပါတယ်.. ကံကောင်းချင်တော့ အဲဒီကုန်သည်ဟာ ရဲအရာရှိလဲ ဖြစ်ပါတယ်… နီလာပျောက်သွားမှန်း သိတော့ နီလာ့ကို ၀ယ်ယူထားတဲ့ တရုတ်ကြီးက ဖုန်းခနခနဆက်ပြီး နီလာ့ကို ပြန်လာဖို့ အကြိမ်ကြိမ် တရုတ်လိုပြောပေမဲ့ နောက်ဆုံးမှာ သူ့ဆီက ဖုန်းကို လုံးဝ မကိုင်တော့ဘဲ နီလာက အဆက်အသွယ် ဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်.
မခင်မွန်တို့ရဲ့ မိတ်ဆွေ ကုန်သည် ရဲအရာရှိဟာ ကား၊ ရထား ရှိတဲ့ ခရီးသွားလာ လွယ်ကူတဲ့ မြို့ကြီးတစ်မြို့က တည်းခိုခန်း တစ်ခုမှာ နီလာ့ကို လုံခြုံစိတ်ချစွာ အပ်နှံထားပေးပြီး နီလာ ရထားစီးနိုင်ဖို့အတွက် အဲဒီမြို့ကြီးက ရဲစခန်းမှာ ထောက်ခံချက် သွားလုပ်ပေးပါတယ်.. နီလာဟာ တရုတ်နိုင်ငံသားလဲမဟုတ်၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လဲ မရှိတဲ့အတွက် ထောက်ခံစာတစ်ခုခု မပါရင် ရထားစီးဖို့ မလွယ်ပါဘူး… ပြီးတော့ သူက တရုတ်စကားလဲ မပြောတတ်တဲ့ အတွက် အခက်အခဲ အများကြီး ရှိပါတယ်.. နီလာတို့ တရုတ်ပြည်တွင်းကို ၀င်ရောက် သွားတာက မှောင်ခို လမ်းကနေ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် ခေါ်သွင်းသွားခြင်း ခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဘာစာရွက် စာတမ်းမှ ပါမသွားပါဘူး… အဆိုးဆုံးတစ်ခုက လစ်ချိန်မှာ ထွက်ပြေးလာတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သူမမှာ ပိုက်ဆံ များများစားစား ပါမလာပါဘူး.. ပြီးတော့ သူမကို ၀ယ်ယူထားသူ တရုတ်ကြီးကလည်း ပိုက်ဆံများများ ပေးမကိုင်ပါဘူး.. ဒီတော့ ရထားစီးဖို့၊ တည်းခိုခန်းခ ပေးဖို့ စားဖို့ သောက်ဖို့ ပိုက်ဆံဆိုတာ နီလာ့မှာ ပါမလာပါဘူး… မူဆယ်မြို့ကို ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့ နီလာမိခင်က မလေးရှားမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ နီလာ့းအဖေနဲ့ အဆက်အသွယ်လုပ်ပြီး သူ့သမီးအတွက် ပိုက်ဆံပို့ပေးဖို့ ဖုန်းဆက်ပြောတော့ သူမဖခင်က လကုန်ရင် ပို့ပေးမဲ့အကြောင်းနဲ့ ခုလောလောဆည်တော့ တစ်ယောက်ယောက်ကို အကူအညီ တောင်းထားဖို့ ပြန်ပြောလာပါတယ်..
မခင်မွန်ကလည်း သူတို့ရဲ့ ကုန်သည်ကို လိုအပ်တဲ့ပိုက်ဆံအားလုံး စိုက်ထုတ်ထားပေးဖို့နဲ့ ဒီဘက်ကို ရောက်လာပါက အားလုံး ပြန်ပေးမဲ့ အကြောင်း အကူအညီ တောင်းရပါတော့တယ်… သဘောကောင်း နားလည်ပြီး လူမှုရေးစိတ်အပြည့်ရှိတဲ့ ကုန်သည်မှ ထောက်ခံစာ၊ တည်းခိုခ၊ ရထားလက်မှတ်ခ၊ စားသောက် နေထိုင်စရိတ်မှအစ အးလုံးကို အကုန်အကျခံ စိုက်ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်… ရထားစီးတော့ တရုတ်ပြည်က ရဲတစ်ယောက် နီလာကို ကူမင်းအထိလိုက်ပို့ပေးပါတယ်.. ကူမင်းမှာ နီလာကို ထားခဲ့ပြီး အတူပါလာတဲ့ရဲက ပြန်သွားပြီ ဖြစ်တဲ့ တွက် ကူမင်းမှ ရွှေလီ( တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ် ) ကို နီလာတစ်ယောက်တည်း လာဖို့ အတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်ပြန်ပါတယ်… ဒီတစ်ခါ ရွှေလီက တရုတ်ကုမ္ပဏီမှာ လုပ်နေတဲ့ မခင်မွန် သူငယ်ချင်းတွေဆီ အကူအညီတောင်းရပြန်ပါတယ်.. ကူမင်းမှာရောက်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ နီလာကို ကူမင်း-ရွှေလီ ကားဂိတ်ပို့ပေးဖို့ လက်မှတ်ဝယ်ပေးဖို့ သူမ သူငယ်ချင်းတွေက ကူမင်းရှိ သူတို့မိတ်ဆွေထံ ပြောပြ အကူအညီ တောင်းပေးပါတယ်..
မခင်မွန် သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ မိတ်ဆွေကလည်း ကူညီပေးပြန်ပါတယ်… ကားလက်မှတ်ဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံ မကျန်တော့တဲ့ အတွက် ကားခကိုလည်း သူတို့က စိုက်ဝယ်ပေး လိုက်ပါတယ်.. နီလာကို ကားလက်မှတ် ၀ယ်ပေးပြီး သူမ စီးရမဲ့ ကားပေါ်ကို တင်ပေး လိုက်ပါတယ်… ကူမင်းမှ မနက်စောစော ထွက်လာတဲ့ကားဟာ ည ၁၀နာရီ ကျော်အချိန်မှာ တရုတ်မြန်မာ နယ်စပ် ရွှေလီမြို့ကို ရောက်လာပါတယ်.. ကားဂိတ်မှာ ကားရပ်တော့ နီလာက မခင်မွန်တို့ဆီ ဖုန်းဆက်လာတဲ့ အတွက် သူ့ကို ကားဂိတ်မှာ သွားကြိုလာခဲ့ပါတယ်… အ၀တ်တစ်ထည် ကိုယ်တစ်ခုနဲ့ ထွက်ပြေးလာသူ နီလာအတွက် လိုအပ်တဲ့ အ၀တ်အစား အားလုံးကို မခင်မွန်က စီစဉ်ပေးပြီး အိမ်မှာ တစ်ည တည်းခိုစေပြီးနောက် နောက်တစ်နေ့ မနက်မှာတော့ မူဆယ်မှာ စောင့်နေတဲ့ သူမ မိခင်ရဲ့ လက်ထဲကို လွှဲအပ်ပေးလိုက်ပါတယ်… မိခင်နဲ့ သမီးဖြစ်သူတို့ ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်စွာ၊ ကြည့်နူးချမ်းမြေ့စွာ ပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါပြီ.. ဘေးက ကြည့်နေတဲ့ မခင်မွန်တို့မှာလည်း ၀မ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်… ဒါပေမဲ့ ၀မ်းနည်းစရာ အကောင်းဆုံးက နီလာလေးဟာ အပျိုစင်တစ်ယောက် ပြန်မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး… သူမရဲ့ မှားခဲ့တဲ့ အမှားကြောင့် ဘ၀မှာ ပြင်မရတဲ့ အမဲစက်လေး တစ်ခုတော့ ကျန်ရစ်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်…
နီလာပြန်ရောက်လာဖို့ ကျသင့်တဲ့ ကုန်ကျငွေ အချို့ကို သူမအဖေက လအကုန်မှာ ပြန်လွှဲပေးခဲ့ပါတယ်….. နီလာရောက်သွားတဲ့ ဟောနန့်ပြည်နယ်နဲ့ မြန်မာနယ်စပ်အရောက် အပြန်ခရီး စရိတ်ဟာ မြန်မာငွေ ၂သိန်းကျော် ကုန်ကျပါတယ်… နီလာ ဒီလို ပြန်ရောက်လာဖို့ကို ဖုန်းနဲ့ အချိန်ပြည့် အဆက်အသွယ် လုပ်နေရတဲ့အတွက် ဖုန်းခ မနည်းမနော ကုန်ကျတာလဲ ပါပါတယ်.. ဒါကို ချပြခြင်းဟာ နီလာ ပြန်ရောက်လာတဲ့ ခရီးဟာ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ပြန်ရောက်လာခြင်းမျိုး မဟုတ်ပါဘူး…တရုတ်ပြည်တွင်း နေရာများစွာမှာ ရောင်းစားခံထားရတဲ့ မြန်မာလူမျိုး မိန်းမငယ်လေးတွေ အများကြီး ရှိနေပါသေးတယ်. သူတို့မှာ နီလာလောက် ကံမကောင်း အခွင့်မကြုံ တဲ့အတွက် ပြန်ချင် သော်လည်း မပြန်နိုင်၊ ဘယ်သူနဲ့မှလဲ အဆက်အသွယ် လုပ်ခွင့်မရနဲ့၊ နွံနစ်နေကြတဲ့ မိန်းခလေးတွေ အများအပြားပါ…
ရောင်းစားခံရသူ အားလုံး နီးပါးဟာလည်း ကျေးလက် အစွန်အဖျား၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု ဝေးကွာတဲ့ တောရွာ သာသာလို နေရာမျိုးတွေ မှာသာ အများအားဖြင့် ရောက်နေကြပါတယ်.. နီလာနဲ့အတူ ရောက်နေကြတဲ့ သူတွေ ထဲမှာတောင် ကံကောင်းစွာနဲ့ နီလာတစ်ယောက်သာ လွတ်မြောက် ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်.. မူဆယ် ပြန်ရောက်တော့ သူမတို့ကို လိမ်ညာလှည့်ဖြား ခေါ်ဆောင်ပြီး တရုတ်ပြည်တွင် ရောင်းစားခဲ့သူ အမျိုးသမီးရဲ့ နံမည် ရုပ်ရည်ပုံစံတို့ကို အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့ကို ပြောပြပြီး ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်ကြပါတယ်.. သိပ်မကြာခင်မှာတော့ ထိုအမျိုးသမီး အဖမ်းခံရကြောင်း ကြားလိုက်ရပါတယ်.. ဒါကတော့ မကောင်းမှု ပြုလုပ်သူ တို့ရဲ့ နောက်ဆုံးရလဒ်ပါ.. သူ့အတွက်တော့ ၀မ်းနည်းစရာ တစ်စက်လေးတောင် မရှိပါ..
အဖြစ်အပျက်သည် နံမည်တစ်ခုမှလွဲ၍ အားလုံး မှန်ကန်သော ဖြစ်ရပ် တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်.. ဒီဇာတ်လမ်းလေးကို တင်ပြရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ နီလာ ကဲ့သို့သော မိန်းခလေးများ ထပ်မံပေါ်ပေါက်မှာ စိုးမိတဲ့အတွက် မြန်မာပြည် တွင်းရှိ မိန်းခလေးငယ်များ အားလုံး ဖတ်မိပြီး ဆင်ခြင်နိုင်ကြဖို့၊ သိရှိနိုင်ကြဖို့ ရေးသားရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်… မြန်မာ မိန်းမငယ်လေးများ နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ် ကောင်းကောင်း ရမယ်.. လစာကောင်းကောင်းရမယ် ဆိုတဲ့ မက်လုံး များကို အလွယ်တကူ မယုံကြည်ကြဖို့ စေတနာဖြင့် အသိ ပေးလိုပါတယ်.. သူတစ်ပါး နိုင်ငံမှာ ဘာသာ စကား မတတ်ဘဲ အလုပ်တစ်ခု ရဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲမှန်း၊ မဖြစ်နိုင်မှန်းကို သဘော ပေါက်သင့် ကြပါတယ်.. မိန်းခလေးတွေရဲ့ ဘ၀ဟာ ပန်းကလေး တစ်ပွင့်နဲ့ တူပါတယ်.. ပန်းဆိုတာ အချိန်မတန်ခင် နွမ်းသွားခဲ့ရင် တန်ဖိုးမရှိ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်.. ဒါကြောင့် ပန်းကလေးတွေနဲ့ တူတဲ့ မိမိတို့ ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားလို့ ထိမ်းသိမ်း စောင့်ရှောက် နိုင်ကြဖို့ ဒီစာလေးနဲ့ အသိပေး လိုက်ပါတယ်.. ပွန့်သောပန်းတိုင်း မွှေးစေချင်ပါတယ်.. မွှေးသော ပန်းတိုင်းလည်း ပင်ယံမှာ ကြာရှည် တင့်ဆန်းလို့ လန်းဆန်း စေချင်ပါတယ်ရှင်…